जोशीको विषयमा चौतर्फी विवाद, पक्षमा कांग्रेस सडकमा, के होला आज ? | mulkhabar.com
जोशीको विषयमा चौतर्फी विवाद, पक्षमा कांग्रेस सडकमा, के होला आज ?
August 1, 2018 | 9:59 am 100 Hits
काठमाडौं, १६ साउन /
प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिको लागि सुनुवाई प्रक्रियामा रहेका कामु प्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीको नाममा सर्वसम्मति जुट्न सकिरहेको छैन । उनले सुनुवाई समितिलाई दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको देखि उनले पेश गरेका शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रहरुबारे पनि प्रश्नहरु उठेका छन् ।
उनको बारेमा विवाद आएपछि सुनुवाई समितिको बैठक केही दिनदेखि स्थगित रहेको छ । आज पुन समितिको बैठक बस्ने कार्यसूची रहेको छ तर आजको बैठकमा के हुन्छ यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
सत्तारुढ नेकपाले उनको पक्षमा धारणा बनाइसकेको छैन भने प्रतिपक्षी कांग्रेसले उनलाई कुनै हालतमा पनि सिफारिस गर्नुपर्नै अडान राख्दै आन्दोलनसमेत शुरु गरिसकेको छ । स्वतन्त्र न्यायलयको पक्षपाती कांग्रेसले मैदानमै उत्रिएर जोशिको पक्षमा लविंग गरेर न्यायलयमा राजनैतिक हस्तक्षेप कायम गर्न खोजेको देखिएको छ ।
जोशीले आफ्नो दाबी गरेको सिम्बोल नम्बरमा हिमबहादुर लेकाली
-क्याम्पसमा जोशीले पेस गरेको प्रोगेस रिपोर्टमा विजय मेमोरियलबाट ०२९ मा एसएलसी गरेको उल्लेख छ । तर, उनले ०२७ मा एसएलसी दिएको अर्को डकुमेन्ट सुरक्षित छ । ‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा हेर्दा ०२९ मा ३६६७ सिम्बोल नम्बरमा हिमबहादुर लेकालीले परीक्षा दिएको भेटिन्छ । लेकालीले नारायण विद्या मन्दिर हाईस्कुल काठमाडौंबाट परीक्षा दिएका हुन् ।
एउटा लेटरहेडमा विद्यालयको नाम अंग्रेजी अक्षर ‘बी’ र अर्कोमा ‘भी’बाट सुरु भएको छ । त्यति मात्र नभई एउटै स्कुलको नाम लेटरहेडमा विजय लेख्दा एउटामा ‘बी’बाट र अर्कोमा ‘भी’बाट सुरु भएको छ । त्यस्तै विद्यालयको नामलगत्तै एउटामा ‘को एजुकेसन’ र अर्कोमा ‘गभर्मेन्ट रेकोग्नाइज्ड…’ भनिएको छ ।
१५ सदस्यीय समितिको ‘सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभए अनुमोदन भएको मानिने’ भन्ने संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ । समितिका १५ मध्ये १० जना सदस्यले प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नगरे संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम अनुमोदन हुनेछ ।
तर, समितिको सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भए प्रस्तावित नामको व्यक्ति सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
हालको सुनुवाइ समितिमा नेकपाका नौ र फोरमका एक गरी सत्तारुढ दलको १० अर्थात् दुईतिहाइ छ । कांग्रेसका चार र राजपाबाट एकजना सुनुवाइ समितिमा सदस्य छन् । राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले ज्येष्ठताका आधारमा समितिको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । मत विभाजन भई निर्णायक मत दिनुपर्ने अवस्था नआएसम्म उनले मतविभाजनमा सहभागिता जनाउन पाउनेछैनन् ।